Uncategorized | 9han News
အိမ်စီးကားများ မေလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ လေးဦးထက် ပိုမမောင်းရ
Admin | April 30, 2020
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မေလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ အိမ္စီးကားမ်ား လေးဦးထက် ပို၍တင်ကာ မောင်းနှင်ခြင်းမပြုရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ထုတ်ပြန်သည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက် ဝင်/ထွက်သွားလာနေသည့် ကုန်တင်ယာဉ်များနှင့် သာမန်အိမ်စီးကားများမှအပ ကျန်ရှိသော ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်လိုင်းများအားလုံး၊ ဘုရားဖူးယာဉ်များအားလုံး၊ အပန်းဖြေခရီးသွားယာဉ်များအားလုံး၊ အလည်အပတ်သွားရောက်သည့် ယာဉ်များအားလုံးနှင့် အိမ်စီးကားများအနက် (ယာဉ်မောင်းများအပါအဝင် (၄)
သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ မလွူနိုင္ေပမဲ့ လွူနိုင္သေလာက္ေလး လွူရတာေပါ့ဆိုတဲ႕ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ျမမဥၨဴပရဟိတ သီလရွင္ေက်ာင္းမွ ဆရာေလးရဲ႕ အလႈေတာ္
သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ မလွူနိုင္ေပမဲ့ လွူနိုင္သေလာက္ေလး လွူရတာေပါ့ဆိုတဲ႕ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ျမမဥၨဴပရဟိတ သီလရွင္ေက်ာင္းမွ ဆရာေလးရဲ႕ အလႈေတာ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ့ ျမမဥၨဴပရဟိတသီလရွင္ေက်ာင္း ဆရာေလး ေဒၚမိတၱာေထရီ မွ Covid ကပ္ဆိုး ကာလမွာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ့မွ ဝင္ေငြမရွိတဲ့ ႏြမ္းပါးမိသားစု အိမ္ (၁၁၀) စာအတြက္ ၾကက္ ဥ အလုံး (၁၁၀၀) ၊
Founded COVID-19 Virus Korea Traveler in Myanmar
9han News is Myanmar’s favourite news, entertainment, lifestyle website. We provide you with the latest breaking news stories everyday.
Articles are displayed in text, video and photo. Visitors can read news in articles type of categories in https://www.9haninfo.coma(example – News, Knowledge, Sport, Health, Celebrities and Lifestyle….etc).
© 2020 9han News.